အဆိုပါ Batman မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
၂၀၂၂ သည် LEGO ၏နှစ်ဖြစ်နိုင်သည် Batman?
18 / 10 / 2021 18 / 10 / 2021 Matt Yeo ပါ 132 Views စာ0မှတ်ချက် ၅၀၀၅၂၂၂ THE BATMAN - BATMOBILE, ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile, ၇၆၁၆၁ ၁၉၈၉ Batwing, 76179 Batman & Selina Kyle မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုက်စားသည်, ၇၆၁၈၁ Batmobile: Penguin Chase, 76183 Batcave: ပုစ္ဆာမျက်နှာချင်းဆိုင်, ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler Scarecrow Showdown, 76240 Batmobile Tumbler, 76240 Tumbler, Aquaman, Aquaman နှင့်ပျောက်ဆုံးသွားသောနိုင်ငံတော်, Aquaman ရုပ်ရှင်, Batman, Black ကအာဒံကို, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Shazam, Shazam: ဘုရားဒေါသ, အဆိုပါ Batman, အဆိုပါ Flash ကို
LEGO DC အတွဲများအတွက်အတော်လေးတိတ်ဆိတ်သောနှစ်နောက်တွင် ၂၀၂၂ သည်နှစ်၏ပုံသဏ္န်ကိုပုံဖော်နိုင်သည်
အသစ် Batman trailer သည် LEGO အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းကိုပြသည်
17 / 10 / 2021 17 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 102 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, ၅၀၀၅၂၂၂ THE BATMAN - BATMOBILE, 76179 Batman & Selina Kyle မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုက်စားသည်, ၇၆၁၈၁ Batmobile: Penguin Chase, 76183 Batcave: ပုစ္ဆာမျက်နှာချင်းဆိုင်, Batman, Batman Movie,, Dc, DC က Fandome, DC က Fandome 2021, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Movie,, အဆိုပါ Batman, နောကျတှဲရထား
p အဖြစ်art DC FanDome 2021 ၏လာမည့် Trailer အတွက်အဓိကနောက်တွဲ Batman အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းကိုပြသပြီးဖြန့်ချိခဲ့သည်
Lego Batman မင်းကို DC FanDome နဲ့ညှိစေချင်တယ်
16 / 10 / 2021 17 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 76 Views စာ0မှတ်ချက် ၅၀၀၅၂၂၂ THE BATMAN - BATMOBILE, Batman, Dc, DC က Fandome, DC က Fandome 2021, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego Technic, နည်းပညာ, အဆိုပါ Batman, တွစ်တာ
DC FanDome သည်ယခုနှင့်လွှင့်နေသည် LEGO Group သင်တေးဂီတကိုသင်ညှိချင်ပေမည်
Lego Batman set သည် LEGO အသစ်ကိုထုတ်ပြသည် Star Wars ထို့အပွငျ
14 / 10 / 2021 14 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 138 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၁၈၁ Batmobile: Penguin Chase, Batman, Dc, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego ကောလာဟလများ, Lego Star Wars, LEGO.com, Matt ရိဗ်, ကောလာဟလာ, Star Wars, အဆိုပါ Batman, အဆိုပါ LEGO Group
နောက်နှစ် LEGO အတွက်နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခု Star Wars line-up သည်တစ်ခုမှပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးသားဖြစ်နိုင်သည်
10 / 10 / 2021 10 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 109 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, ၅၀၀၅၂၂၂ THE BATMAN - BATMOBILE, 70917 အဆိုပါ Ultimate Batmobile, 76179 Batman & Selina Kyle မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုက်စားသည်, ၇၆၁၈၁ Batmobile: Penguin Chase, 76183 Batcave: ပုစ္ဆာမျက်နှာချင်းဆိုင်, Batman, Dc, Lego, Lego 2022, Lego Batman, Lego Batman Movie,, Lego DC က, Lego Technic, ရဲတပ်ဖွဲ့, လမ်းပြ, နည်းပညာ, အဆိုပါ Batman, အဆိုပါ Lego Batman Movie,
Jeffrey Wright ယခုနှစ်ယောက်စလုံးအတွက် LEGO minifigure ရှိသည် Marvel နှင့် DC
09 / 10 / 2021 10 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 78 Views စာ0မှတ်ချက် 76183 Batcave: ပုစ္ဆာမျက်နှာချင်းဆိုင်, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, Batman, ကော်မရှင်နာဂေါ်ဒွန်, Dc, ဂျက်ဖရီ Wright, Lego, Lego DC က, Lego မှ marvel, lego minifigure, Lego Minifigures, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Michael keaton, အသေးစား, သေးသေးလေး, အဆိုပါ Batman, Watcher, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
Jeffrey Wright သည် LEGO စူပါဟီးရိုးဇာတ်ကောင်နှစ်ခုလုံးတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသောသရုပ်ဆောင်အနည်းငယ်ထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 116 Views စာ0မှတ်ချက် Batman, Black က Panther, ထာဝရက Black Panther Wakanda, Dc, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel စတူဒီယို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Batman, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, Wolverine
LEGO The New Batman ပွေ့ဖက်ထားပါ Speed Champions စကေး
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 124 Views စာ0မှတ်ချက် ၅၀၀၅၂၂၂ THE BATMAN - BATMOBILE, ၇၆၁၈၁ Batmobile: Penguin Chase, 76183 Batcave: ပုစ္ဆာမျက်နှာချင်းဆိုင်, Dc, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego Speed Champions, Speed Champions, အဆိုပါ Batman, ပင်ဂွင်း
LEGO အသစ် The The မှထွက်သည် Batman မော်ဒယ်များသည်အခြားအခင်းအကျင်းမှလှုံ့ဆော်မှုယူပုံရသည်
အလားအလာလေးရပ် The Batman LEGO အစုံအသစ်၌တွေ့သောကြံစည်မှုအချက်များ
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 101 Views စာ0မှတ်ချက် 76179 Batman & Selina Kyle မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုက်စားသည်, 76183 Batcave: ပုစ္ဆာမျက်နှာချင်းဆိုင်, အဲဖရက်, အန်ဒီ Serkis, Batman, Batman Movie,, ဘရုစ်ဝိန်း, Catwoman, DC က Fandome, DC က Fandome 2021, Lego, Lego Batman, Lego DC က, လမ်းပြ, Selina Kyle, အဆိုပါ Batman, Riddler သည်
DC FanDome 2021 တွင်နောက်ထပ်နောက်တွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ LEGO The အသစ် Batman အစုံသည်အချက်လေးချက်ကိုဖော်ပြနိုင်သည်